डीडीसीले ११ करोड थप्दै, अब किसानलाई मिल्क होलिडेबाट राहत — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उद्योग > डीडीसीले ११ करोड थप्दै, अब किसानलाई मिल्क होलिडेबाट राहत
चैत महिनामा दूध सङ्कलन कम हुने भएकाले कारखाना विस्तार सहज हुने अनुमान गरिएको छ । “हाल २० हजार लिटर दूधबाट धुलो दूध उत्पादन भइरहेको छ”, प्रबन्धक सिम्खडाले भने, “यसबाट एक हजार ६ सय किलोग्राम धुलो दूध उत्पादन हुन्छ ।
कारखानाको विस्तार गरिएपछि थप ४० हजार लिटर दूधबाट धुलो दूध उत्पादन गर्न सकिने छ । दैनिक ६० हजार लिटर दूधबाट पाँच हजार किलोग्राम धुलो दूध उत्पादन गर्न सकिनेछ सिम्खडाले जानकारी दिए । धुलो दूधको कारखानाको विस्तार गरिएपछि पूर्वका किसानले ‘मिल्क होलिडे’को समस्या भोग्नु नपर्ने सिम्खडा बताउँछन् ।
प्रबन्धक सिम्खडाका अनुसार पूर्वक्षेत्रका किसानले जति दूध उत्पादन गरे पनि संस्थानले खरिद गर्नेछ । सो कारखानाबाट उत्पादित धुलो दूधको बजार काठमाडौँ हो । टेन्डर भएर संस्थानको परिसरमा मेसिन समेत आइसकेको छ ।
मेसिन जडान गरेपछि दूध उत्पादन बढ्नेछ । हाल किसानबाट सङ्कलित ३० हजार लिटर दूध विराटनगरस्थित आयोजनामा आइरहेको छ । विराटनगरमा सङ्कलन गरिने दूधमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत इलामबाट आउँछ ।
यसबाहेक पाँचथर, झापा, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरीबाट पनि दूध सङ्कलन भइरहेको छ । पूर्वाञ्चल क्षेत्र दूध र दूधजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर रहेको बताइन्छ ।
६ फागुन २०७३, रासस, १२।००
२०७३ फागुुण ६ गते १३:०५ मा प्रकाशित
आज फेरि २ सयले बढ्यो सुन, हेर्नुहोस् तोलामा कति पुग्यो ?
चन्दा दिएर राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक लाभ लिएको आरोपमा पक्राउ परे सामसुङ प्रमुख !
एकै जिल्लाका ३२ हजार बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् !
अखिलको मैत्रीपूर्ण फुटसल पत्रकार महासङ्घ, अखिल ‘वि’ र अखिल महिला विजयी